Dowladda St. Kitts & Nevis hadda ma tahay Shirkad Dembiyeed?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Saint Kitts iyo Nevis Breaking News » Dowladda St. Kitts & Nevis hadda ma tahay Shirkad Dembiyeed?
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Lubnaan • News • Dadka • Saint Kitts iyo Nevis Breaking News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Ma u baahan tahay inaad iibsato baasaboor shisheeye? St. Kitts iyo Nevis waxay diyaar u yihiin inay ka iibiyaan baasaboorkeeda qadhaadhka ugu sarreeya- in ka badan, ka sii fiican- oo dhammaan waa sharci iyo rasmi.
Ka waran inaad noqoto muwaadin waddan aadan waligaa booqan oo aadan waligaa booqan, laakiin aad marin u hesho 160 waddan oo kale?
Dawladda St. Kitts iyo Nevis waxay shirqooleen Shirkada British Global CS Partners si ay arrintan u fududeeyaan.
PR Newswire wax dhibaato ah kuma lahan ka mid ahaanshaha qorshaha kor loogu qaadayo hawlahan adduunka.
Maanta CS Global Partners waxay xayeysiisay qaas u ah sii deynta warsaxaafadeed PR NewsWire ee saxafigu si uu u soo qaado oo u daabaco warbixinta cabsida ee Lubnaan oo uu ka iibiyo dhalashada dadka Lubnaan si ay u noqdaan St. Kitts iyo Nevis
CS Global Partners xitaa waxay maanta leeyihiin qiime gaar ah oo loogu talagalay baasaboorada St. Kitts iyo Nevis waxayna ka digeen inay tani tahay waqti xaddidan oo kaliya.
St. Kitts iyo Nevis oo ka maqan dalxiiska ayaa u baahan lacagta. Maraykanka iyo Midowga Yurub waxay sii wadi doonaan inay oggolaadaan muwaadiniinta St. Kitts iyo Nevis bilaa fiiso. Maraykanku dhab ahaantii wuxuu heshiis gaar ah la leeyahay St. Kitts oo ah qorshe si fudud loogu heli karo oggolaanshaha shaqada Maraykanka iyo Green Card- dhammaantood waa la iibiyaa.
Iibinta dhalashada ayaa ah isbeddelkii ugu dambeeyay ee ganacsiga dalal badan oo lacag-gaajaysan oo adduunka ah. Dalalka noocan oo kale ah ayaa inta badan sumcad aad u fiican ku leh adduunka, sidaa darteed muwaadiniinta cusub waxay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka iyo marin u helidda waddammada aysan sida caadiga ah si sahal ah ugu heli karin fiisooyinka. Marka laga hadlayo St. Kitts, muwaadinku wuxuu bilaa fiise gali karaa in ka badan 160 dal.
Muwaadinimada noocan oo kale ah waxay kaloo gadaal u yihiin rukhsadaha shaqada iyo kaararka cagaaran ee Mareykanka.
CS Global Partners ayaa maanta ku boorriyay qoysaska Lubnaan inay noqdaan muwaadiniinta St. Kitts iyo Nevis.
Tani waa farriintii loo qaybiyey Dadka Lubnaan iyagoo matalaya Dawladda St. Kitts iyo Nevis
Warbixin Cusub ayaa ka digaysa 'Baxniintii Saddexaad ee Masaajidka' oo ka timaada Lubnaan, Gaar ahaan Bi-Muwaadiniinta marka ay Xiisaddu Dardargasho
St. Kitts iyo Nevis war -saxaafadeedka uu faafiyay wakiilka dalalka CS GLobal Partners wuxuu ku bilaabmayaa warbixinta cabsida loogu talagalay in lagu abuuro quus iyo saxafiyiinta inay xiiseeyaan goobta sheekada.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu yiri:
Warbixin ay daabacday Kooxda Dabagalka Dhibaatooyinka ee Jaamacadda Lubnaan ee Jaamacadda Beirut ayaa lagu soo gabagabeeyey in ummaddu ay galayso mowjad saddexaad oo qax ah. Sida lagu sheegay warbixinta, tilmaame gudaha ah oo ku saabsan soo gelitaanka Lubnaan ee hirarka socdaalka ee ballaaran ayaa ah fursadda sare ee tahriibka ee dhallinyarada Lubnaan. Iyada oo ku saleysan sahan la sameeyay sanadkii hore, 77 boqolkiiba dhalinyarada Lubnaan waxay sheegeen inay ka fikirayaan inay haajiraan oo ay raadsadaan, boqolleydanina waa tan ugu sarreysa dhammaan dalalka Carabta.
Lubnaan tan iyo markaas waxay u dulqaadatay dhibaatooyin badan, oo ay ku jiraan dagaalo, dilal, iyo iskahorimaadyo siyaasadeed oo ay sababeen tobannaan sano oo musuqmaasuq ah iyo maamul xumo. Lacagta Lubnaan ayaa hoos u dhacday ku dhawaad ​​80 boqolkiiba, halka kuwa wax kaydiya ay waayeen fursad ay ku kaydsan lahaayeen noloshooda. Xirfadlayaal badan, oo ay ku jiraan dhakhaatiir, aqoonyahanno, ganacsato, iyo naqshadeeyayaal, ayaa ka tagay ama qorshaynaya inay tagaan. Xaalado badan, waxay ku sawirayaan jinsiyado labaad oo ay heleen waalidiin ama ayeeyooyinkii ka tagay Lubnaan hirarkii socdaalka ee waagii hore.
Kuwa aan hore u haysan dib-u-celinta dhalashada hore ee awoowayaasha waxay adeegsadeen habab aan caadi ahayn si ay u helaan dhalashada. Micha Emmett, Maamulaha Guud ee CS Global Partners, oo ah latalinta xalka muwaadinimada oo xaruntiisu tahay London, ayaa sheegtay in tirada sii kordheysa ee muwaadiniinta Lubnaan ay wax ka weydiinayeen barnaamijyada Jinsiyadda ee Maalgashiga (CBI). CBI waa hab socdaal kaas oo maalgeliyuhu ku tabarucayo qaddar lacageed oo gaar ah dhaqaalaha qaranka si loogu beddelo muwaadinimo, taas oo aakhirka keenta baasaboorka dalkaas.
"CBI badiyaa waa meesha ugu wanaagsan uguna dhaqsaha badan kuwa si aan la hubin ula kulma dalkooda hooyo oo doonaya hab lagu sugo hantidooda iyo mustaqbalka qoyskooda," ayuu yiri Emmett. “Nasiib darro, dunidan aan ku noolnahay waxay noqon kartaa mid aan la saadaalin karin, waqtiyo xunna waxay nagu soo dhici karaan daqiiqad kasta. CBI waxay u oggolaaneysaa shaqsiyaadka inay yeeshaan qorshe gurmad ah oo loogu talagalay daqiiqadahaan. ”
Qaar ka mid ah Barnaamijyada CBI ee aadka loo raadinayo waxay ku yaalliin Kariibiyaanka, halkaasoo fikraddu ka timid. Dhalashada ka timid St Kitts iyo Nevis 'Barnaamijka CBI waa la gaari karaa iyada oo aan dhib ku qabin degenaanshaha ama safarka loo baahan yahay. Geedi socodka oo dhan guud ahaan waxaa lagu samayn karaa internetka dhawr bilood gudahood. Sida laga soo xigtay khabiiro ka tirsan majaladda Financial Times 'PWM magazine, barnaamijkan wuxuu hadda ku jiraa kan ugu wanaagsan adduunka.
Dadka u dhashay St. Waxay kaloo ku dari karaan ku tiirsanayaasha waxayna u gudbin karaan dhalashadooda jiilasha soo socda.
Intaa waxaa dheer, midkoodna Muwaadiniinta St. Nevis ee dhowaan la aqbalay ma aha inay si dhab ah u booqdaan waddanka ay ka qaataan baasaboorka.
Marka la eego dalabka waqti xaddidan, qoys ilaa afar ah waa inay ku darsadaan oo keliya USD150,000, taasoo ka dhigan dhimista USD45,000.
Ceeb ku ah St. Kitts iyo Nevis samaynta albaabkan dambe ee muwaadinimada la iibsaday.
Socdaalku waa arrin culus waana in la siiyaa dadka u qalma inay dib uga bilaabaan dalka ay codsadaan muwaadinimada.
Iibinta muwaadinimada ma aha oo kaliya khalad, waxay wiiqaysaa sharafta muwaadinnimada guud ahaan. Waxa kale oo ay khatar iyo badbaado amni ku tahay oo keliya in waddanku bixiyo baasaboor iib ah laakiin sidoo kale dal kasta oo fursad siinaya baasaboorkan dartiis.